Dhalasho Wacan Super Star-ka Bollywood-ka ku Aftirsadaan Amitabh Bachchan iyo Taariikh Nololeedka Qaybta 1-aad | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Dhalasho Wacan Super Star-ka Bollywood-ka ku Aftirsadaan Amitabh Bachchan iyo Taariikh Nololeedka Qaybta 1-aad
Dhalasho Wacan Super Star-ka Bollywood-ka ku Aftirsadaan Amitabh Bachchan iyo Taariikh Nololeedka Qaybta 1-aad
Taariikhda: October 11, 2017
Amitabh Harivansh Rai Shrivastava Bachchan wuxuu dhashay 11 October 1942 waa atoore Hindi ah oo haatan da’diisa tahay 75-sano sidoo kalena ah jilaaga ugu magaca dheer ee ebid Bollywood-ka soo maray.
Amitabh Bachchan wuxuu magac helay bilawgii 70-kii markii uu sameeyay filimada hirgaleen Zanjeer iyo Deewar waxaana loo bixiyay bilawgii waayihiisa fanka India’s first “angry young man” sababtana waxay tahay inuu filimada wiil xanaaq ama caro badan ku matali doono.
Magacyada kale ee Amitabh loogu yeero waxaa ka mid ah “Shahenshah of Bollywood”, “Star of the Millennium” ama “Big B”.
Amitabh wuxuu jilay in ka badan 180-filim asigoo mudada 40-ka sano ka badan ee uu Bollywood-ka ka tirsan yahay waana jilaa sameeyay door walbo.
Bachchan waxaa la isku raacayay inuu yahay jilaaga ugu weyn uguna saameynta balaaran ee taariikh ahaan fanka Hindiya soo maray.
Amitabh awoodii uu Hindiya ku heestay 70-kii iyo 80-kii waxaa la yaabay Director-ka reer France François Truffaut kaasi oo ugu yeeray Amitabh “one-man industry” ama hal nin oo shirkad dhan kaligiis hogaamiyo.
Big Bachchan waayihiisa fanka ee aadka u dheer wuxuu u suura galiyay inuu ku guuleesto 4-jeer bilada National Film Awards ee dowlada Hindiya bixiso iyo abaal marino kale oo caalami ah.
Waxaa xusid mudan in Amitabh uu ku guuleestay 15-biladood oo kala duwan oo ay shirkada Filmfare Awrads ku siisay qaab jilinkiisa kala duwan waxa uu ku kasbaday.
Waxaa kaloo cajiib ah in 40-abaal marin oo kala duwan ee Filmafare bixiso inuu u tartamay waana jilaaga ugu badan ee abaal marino kala duwan u tartamay taariikh ahaan.
Big B atoore kaliya ma ahan sidoo kale waa heesa, filim soo saare, jilaa Tv-yada barnaamijyada ka qabto sidoo kalena siyaasada Hindiya ku lug yeeshay dhamaadkii 80-kii.
Dowlada Hindiya waxay ku sharaftay Amitabh inay siisay bilada Padma Shri sanadii 1994 (waa bilada 4-aad ee ugu sareys darajo ahaan ee muwaadinka Hindiga ah la siiyo), Padma Bhushan waxaa la siiyay sanadii 2001 (waa bilada 3-aad ee ugu sareys darajo ahaan ee muwaadinka Hindiga ah la siiyo), Padma Vibhushan waxaa la siiyay sanadii 2015 waana bilada bilada 2-aad ee ugu sareys darajo ahaan ee muwaadinka Hindiga ah la siiyo.
Dowlada France sidoo kale Big Bachchan waxay ku sharaftay inay siisay bilada ugu sareyso ee muwaadin Faransiis ah la siiyo (Legion of Honour) sanadii 2007 waxaana lagu siiyay inuu saameyn balaaran ku yeeshay fanka dunida iyo gaar ahaan midka dalka France.
Bachchan sanadii 2013 ayuu Hollywood-ka ku biiray wuxuuna wax ka sameeyay filimka The Great Gatsby ee Leonardo DiCaprio hogaamiyaha ka ahaa.
Amitabh Bachchan Iyo Bilawgii Noloshiisa Marxaladaha Ay Soo Martay:
Bachchan wuxuu ku dhashay magaalada Allahabad, ee ka tirsan gobolka Uttar Pradesh, Waqooyiga bartamaha Hindiya.
Amitabh aabihiis Harivansh Rai Srivastava (Bachchan) wuxuu ahaa gabyaa Hindiya siweyn looga yaqiinay sidoo kalena hooyadiis Teji Bachchan waxay kasoo jeedaa qowmiyada Sikh ee Punjab ku nool.
Amitabh markii hore waxaa loogu yeeri jiray Inquilaab waana magac Hindiya caan ka ahaa Inquilaab Zindabad waxaana la adeegsan jiray xiligii Hindiya halganka ugu jirtay inay xurnimo Ingiriiska ka hesho.
Inquilaab Zindabad micno ahaan waxaa laga wadaa “Kacaanka mudo dheer ha noolaado ama ha waaro’
Balse Amitabh aabihiis waxaa la taliyeen saaxiibadiisa gabayga ku xirfad ahaayeen oo usoo jeediyeen in wiilkiia uu u bixiyo magaca “Amitabh” oo micno ahaan laga wado “Iftiinka aan marnaba dhiman ama damin”. Amitabh aabihiis wuxuu geeriyooday sanadii 2003 halka hooyadiis ay geeriyootay 2007.
Amitabh wuxuu ka mid yahay ardayda ka qalanjibsay Sherwood College ee magaalada Nainital ku yaalo kadibna wuxuu wax ka bartay Kirori Mal College, Delhi University.
Amitabh waxaa jiro walaal ka yar oo la dhashay laguna magacaabo Ajitabh, waxaa la sheegay in Amitabh hooyadiisa ay xiiso u qabi jirtay sameynta ruwaayadaha waxaana ka hada ka hor loo bandhigay sameynta filim kooban laakiin waxay ka doorbiday inay guri joogto iska ahaato.
Amitabh hooyadiis Teji saameyn xoogan ayay ku laheyd go’aanadiisa fanka waxayna kala talin jirtay filimada uu dooran jiray tayo ahaan iyo dhaqaalo ahaan waxa uu ku heli karay.
Amitabh wuxuu guursaday atirishada lagu magacaabo Jaya Bhaduri oo haatan caan ku ah Jaya Bachchan, labadaan lamaane waxaa u joogaan labo caruur ah Shweta Nanda waxay u dhaxdaa ganacsadaha Nikhil Nanda iyo Abhishek Bachchan oo atoore ah wuxuuna qabaa atirishada lagu magacaabo Aishwarya Rai Bachchan.
Amitabh Bachchan Iyo Bilawgii Waayihiisa Fanka 1969 Ilaa 1972:
Big Bachchan wuxuu filimada kusoo biiray sanadii 1969, filimkii kowaad ee uu sameeyay wuxuu ahaa Bhuvan Shome balse Amitabh cod kaliya ayuu ku lahaa wuxuuna ka sheekeenayay doorarka kala duwan ee filimkaan waxaana lagu qaatay filimkaan abaal marinta National Film Awards.
Laakiin filimka kowaad ee uu muuqaal dhameestiran ku lahaa wuxuu ahaa Saat Hindustani wuxuuna ka mid ahaa 7-atoore ee filimkaan wax ka jileen sanadii 1969 ayuu soo baxay.
Amitabh filimkiisii xigay wuxuu ahaa Anand oo sanadii 1971 soo baxay wuxuuna ka ahaa atoore caawiye ayadoo atoore kowaad ka ahaa Rajesh Khanna oo xiligaas ahaa Super Star-ka Hindiya ugu weyn.
Amitabh doorkiisii wacnaa filimka Anand wuxuu ku muteestay abaal marintiisii ugu horeeyay ee Filimfare Awards bixiso qaybta atoore caawiyaha ugu wanaagsan ( Best Supporting Actor award).
Kadib Amitabh Bachchan filimkiisii kowaad ee uu hogaamiye ka noqday wuxuu sameeyay isla sanadii 1971 wuxuuna filimkaas ahaa Parwaana sidoo kalena filimkii Reshma Aur Shera isla sanadii 1971 ayuu sameeyay laakiin labadaan filim wey ka guul dareesteen.
Sanadii 1972 Amitabh wuxuu door caawiye ah ku yeeshay filimkii shactirada badnaa Bombay To Goa wuxuuna noqday filim guul dhex dhexaad ah gaaray.
Mr. Bachchan bilawgiisa fanka ma wanaagsaneyn madaama filimada uu sameeyay badankooda ganacsi ahaan fashilmeen asigana uma suura galin si dhaqsi ah inuu xidig isku filan noqdo.
Amitabh Iyo Markii Uu Noqday Xidiga Soo Caan Baxay Bollywood-kana Qabsaday 1973-1983:
Director Prakash Mehra ayaa Amitabh Bachchan hogaamiye kaga dhigay filimkiisii Zanjeer sanadii 1973 wuxuuna ku matalay Amitabh filimkaan doorka Inspector Vijay Khanna.
Zanjeer wuxuu ahaa filim fariin cusub kusoo kordhiyay Bollywood-ka madaama uu ahaa Action iyo murugo xoog leh wuxuuna noqday filim Classic ah kaasi oo Super Hit weyn noqday sidoo kalena Amitabh xidig soo caan baxay oo Hindiya dhan laga jeclaado ayuu noqday.
Wixii markaas ka dambeeyay wadada guusha ayuu cagaha la helay Amitabh sidoo kalena Zanjeer wuxuu ka caawiyay markii ugu horeesay inuu u tartamo abaal marinta Filmfare Awards qaybta atooraha ugu wanaagsan.
Sidoo kalena isla sanadii 1973 waa sanadkii uu Amitabh guursaday Jaya Bachchan oo ay Zanjeer isla jileen sidoo kalena filimo badan ayay isla sameeyeen xiligaas waxaana ka mid ahaa filimkii Abhimaan ee la daawaday hal bil kadib markii Amitabh iyo Jaya aqal galeen wuxuuna noqday filim guul dhex dhexaad gaaray.
Dhamaadkii 1973 Amitabh wuxuu sameeyay filimkii weynaa Namak Haraam oo ay isla jileen Rakesh Khanna waxaana filimkaan iska lahaa Director Hrishikesh Mukherjee, Bachchan doorkiisii wacnaa wuxuu ku qaatay abaal marinta Filmfare Awards qaybta atoore caawiyaha ugu wanaagsan waana filim guul weyn gaaray xiligaas.
Inta badan Bachchan sanadii 1974 filimadii uu sameeyay muuqaal marti ah ayuu ku lahaa laakiin dhamaadkii sanadkaas ayuu la yimid filimkii Majboor ee Hit-ka weyn noqday waxaana sheeko ahaan filimkaan laga soo min guuriyay filimka Hollywood-ka ah Zig Zag.
Sanadii 1975 Amitabh wuxuu sameeyay filimo fariin ahaa kala duwan sida filimka shactirada ah Chupke Chupke oo ay wada jileen Dharmendra wuxuuna gaaray guul dhex dhexaad ah, Faraar oo ahaa filim dambi iyo qayaano isku jiro ah balse wuu ka guul dareestay, Mili oo isagana sheeko qiiro badan ayaa guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray.
Laakiin sanadii 1975 xidigaan wuxuu la yimid labadii filim ee taariikhda Hindiya dhanka fanka baal dahab ah ka galeen ilaa haatana loo dhawaan karin.
Filimka kowaad ee Deewar waxaa iska lahaa Yash Chopra waxaana Amitabh la jileen Shashi Kapoor, Nirupa Roy, and Neetu Singh, wuxuuna noqday Hit weyn asigoo kaalinta 4-aad ka galay 4-filim ee lacagaha ugu badnaa sanadkaas soo xareeyya sidoo kalena Amitabh atooraha ugu wanaagsan ayuu u tartamay shirkada Filmfare bixiso.
15-kii August 1975 Amitabh Bachchan wuxuu la yimid filimka Sholay oo ay isla jileen Dharmendra waana filimka ugu weyn ee ebid Hindiya sameeyeen ganacsi ahaan iyo sheeko ahaan.
BBC-da sanadii 1999 waxay u dooratay filimka qarniga aduunka ugu saameynta badnaa qarnigii 20-aad sidoo kalena Filmfare waxay siisay filimka ugu wanaagsanaa ee ebid Bollywood-ka sameeyeen 50-guuradii shirkada Filmfare ayaa biladaas lagu bixiyay.
Sholay waxaa lagu daray sheekadiisa buuga fasalka 6-aad lagu qaato Hindiya luqad ahaan marka loo baranaayo waxaana loogu daray in filimkaan ka hadlaayo qiimaha saaxiibtinamada ay leedahay.
Sholay waa The Biggest Hit in Indian Cinema wuxuu saarnaa tiyaatarada mudo 5-sano ah sidoo kalena lacagaha kowaad ee uu soo xareeyay waxay ahayd 15 Crore ayadoo maantadan u dhiganto 1,627 Crore!
Sidoo kale Sholay waxaa la isku raacay inuu yahay filimka ugu daawashada badan ebid ama tikit-ka ugu badan loo goostay waxaana qiyaas ahaan loo sheegaa in ka badan 100-milyan oo qof ay tikit u goosatay daawshada Sholay!
Sholay iskoorka lacagaha ama filimka lacagaha ugu badan gudaha Hindiya kasoo xareeyay wuxuu heestay mudo 19-sano ah oo loo dhawaan waayay in booska kowaad lagala baxo.
La Soco Qaybta Labaad: Sholay Kadib Amitabh Awoodiisa Heerka Ay Gaartay Iyo Sida Uu Mudo 14-sano Oo Xariir Ah Bollywood-ka Hogaamiye Ugu Ahaa…..
Maanta Gelinka Dambe Naga Fisha Qaybta Labaad Taariikhda Big Bachchan Oo Maanta 75-sano Jirsaday.
Waxaa Aqrisay 1,292